How to Play Video on TV from USB Pen Driver | OS-STORE BLOG
Ahoana no Play Media File amin'ny Smart TV avy amin'ny USB Pen Driver
Jona 17, 2019 ecommerce Electronics, OS-STORE, Other, Products, teknolojia 0
Aza mieritreritra hoe fotsiny noho ny fahitalavitra manana USB seranan-tsambo, dia mety milalao antontan-taratasy avy amin'ny Pen Driver. Amin'ny tranga sasany, ny seranan-tsambo dia natao fotsiny ho an'ny fampiasana ny injeniera izay mila hihazakazaka rindrambaiko amin'ny fahitalavitra, ohatra, ny vaovao farany na hanamboarana ny voatendry. Ny sasany dia mety afa-tsy milentika ho afaka maneho lahatsary antontan-taratasy indray mandeha ianao no nanampy ny safidy eo amin'ny sakafo fanompoana amin'ny fomba ofisialy izay tsy namoaka ny mpanjifa; Tandremo tsara ny karazan-tsakafo toy izany araka izay mety hisy vokany eo amin'ny TV ny fampisehoana amin'ny alalan'ny fanompoana ny fanovana toe-javatra sakafo.
Alohan'ny mampifandray ny fitaovana ho amin'ny TV, azafady aoriana ambony ny antontan-taratasy mba nisakana azy ireo tsy simba na ny fahaverezan'ny tahirin-kevitra
Atombohy ny hampifandray ivelany Device (USB Storage) >>>
Raha misy fitaovana USB dia mifandray amin'ny USB seranan-tsambo, Pop-up iray hafatra hiseho mamela anao mora foana ny mifamadika ny haino aman-jery votoaty voatahiry amin'ny fitaovana USB.
2. Tsindrio ny bokotra Home amin'ny Smart Control, mba hahazoana ny Home Screen.
3. Tsindrio ny bokotra HOME amin'ny lavitra, hamakivaky ny Source sy mifidy USB Device / mifandray Device
4. Mifidy ny antontan-taratasy tianao hilalao ao amin'ny TV
File Formats >>>
Raha manao fanohanana ny TV lahatsary playback avy Pen Driver, ny lafin-javatra izay misy fiantraikany lehibe ny fahaizanao manokana hijery ny lahatsary dia ny rakitra endrika. Dia mila mijery ny mpampiasa na ny fampahafantarana boky fampianarana ara-nofo ho an'ny manokana napetraka mba hahita izay manohana ny endriky azy. Formats izay nanohana tamin'ny milentika maro ahitana MPG, MP4, DIVX, xvid, WMA, sy ny AVI, na dia ny mahazatra ny iray manokana napetraka mba hanohanana izany ihany ny sasany lisitra. Formats izay kokoa zara raha ahitana manohana MKV (ampiasaina matetika ho an'ny fizarana avo-famaritana ny votoaty an-tserasera), VOB (ny antontan-taratasy ampiasaina amin'ny DVDs) ary 3GPP (ny endrika ampiasaina amin'ny finday amin'ny lahatsary be taona fakan-tsary). Milentika sasany fotsiny hilalao ny lahatsary ao amin'ny nanohana endrika raha amin'ny vahaolana manokana, na ao anatin'ny fanapahan-kevitra isan-karazany manokana. Ireo rehetra ireo dia mety midika famerana mila hiova finoana na indray isa sasany lahatsary antontan-taratasy mba hijery azy ireo amin'ny alalan'ny Pen Driver amin'ny napetraka manokana.
Mahazoa fampahalalana bebe kokoa – Kitiho eto
Ahoana no handoro Blu-Ray BD CD DVD Disc in Computer
Ny fomba hamahana ny tsy Drive Optical mametraka na mahita ao amin'ny Windows
Dell 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 Wireless Bluetooth Card Mpamily Windows Download
Computer Optical Drive Device hafahafa Specifications ny feno dia ahitana Description anatiny sy ivelany
64-kely Windows mpitantana Fitaovana mpamily fanohanana processors Processor Series Driver Support OS-STORE fandikana ara-dalàna Intel Software Technology_Internet HTC Nokia Samsung HD Graphics Device Model teknolojia Public Tanjona Unité centrale Finday
HD Graphics fandikana ara-dalàna Series Driver Support Samsung Processor finday avo lenta 64-kely Windows Unité centrale OS-STORE Samsung Galaxy Software mpamily fanohanana Intel Intel Server teknolojia Technology_Internet HTC Qualcomm Nokia mpitantana Fitaovana processors Public Tanjona Device Model Sony Ericsson Finday